Ukuthuthukiswa kwe-nanotechnology nama-nanomaterials kunikeza izindlela nemibono emisha yokuxhashazwa kwemikhiqizo ye-antistatic. Ukusebenza, i-electromagnetic, i-super absorptive kanye ne-broadband izakhiwo zezinto ze-nano, kudale izimo ezintsha zocwaningo nokuthuthukiswa kwezindwangu zokumunca eziqhutshwa kahle. Izembatho ze-Chemical fiber kanye namakhaphethi we-chemical fiber, njll., Ngenxa kagesi ongaguquguquki, kukhiqiza imiphumela yokukhipha ngesikhathi sokushayisana, futhi kulula ukumunca uthuli, olubangela ukuphazamiseka okuningi kubasebenzisi; amanye amapulatifomu okusebenza, i-cabin welding nezinye izindawo zokusebenza ezingaphambili zijwayele ukuba nezinhlansi ngenxa kagesi we-tuli, ongadala ukuqhuma. Ngokombono wokuphepha, ukwenza ngcono ikhwalithi yemikhiqizo yamakhemikhali nefibre nokuxazulula inkinga kagesi we-tuli yimisebenzi ebalulekile.
Ukungeza i-nano TiO2, nano ZnO, nano ATO, nano AZO futhi nano Fe2O3 ama-nano powders anezakhiwo ze-semiconductor ku-resin azokhiqiza ukusebenza okuhle kokuvikela i-electrostatic, okunciphisa kakhulu umphumela we-electrostatic futhi kuthuthukise kakhulu ukuphepha.
I-masterbatch ye-antistatic elungiswe ngokusabalalisa ama-carbon nanotubes anezindonga eziningi (i-MWCNTs) kusithwali se-antistatic esenziwe ngokwakho i-PR-86 singakhiqiza imicu ye-antistatic PP enhle kakhulu. Ukuba khona kwama-MWCNTs kuthuthukisa izinga lokwehlukaniswa kwesigaba se-microfiber nomphumela we-antistatic we-antistatic masterbatch. Ukusetshenziswa kwe-carbon nanotubes nakho kungathuthukisa ikhono le-antistatic lezintambo ze-polypropylene nemicu ye-antistatic eyenziwe ngemixube ye-polypropylene.
Sebenzisa i-nanotechnology ukuthuthukisa izinto zokunamathisela ezihambisanayo nezingubo ezihambisanayo, ukwenza ukwelashwa ngaphezulu kwezindwangu, noma ukufaka izimpushana zensimbi ze-nano ngesikhathi senqubo yokuphotha ukwenza imicu iqhubeke. Isibonelo, kumenzeli we-antistatic we-polyester-nano antimony doped tin dioxide (ATO) ejenti yokuqedela, kukhethwa i-dispersant ezinzile enengqondo yokwenza izinhlayiya zisendaweni eyodwa, futhi i-antistatic kumaliza agent isetshenziselwa ukwelapha izindwangu ze-polyester nendwangu ebusweni ukumelana. Ubukhulu bokungalashwa> 1012Ω buncishisiwe baba ubukhulu be <1010Ω, futhi umphumela we-antistatic empeleni awushintshiwe ngemuva kokuwasha izikhathi ezingama-50.
Imicu eqhubayo enokusebenza okungcono ifaka phakathi: i-black conductive chemical fiber ne-carbon black njengezinto ezihambayo kanye ne-white conductive chemical fiber enezinto ezimhlophe ze-powder ezifana ne-nano SnO2, i-nano ZnO, i-nano AZO ne-nano TiO2 njengezinto zokuqhuba. Imicu emhlophe yethoni emhlophe isetshenziselwa ukwenza izingubo zokuzivikela, izingubo zomsebenzi nezinto zokuhlobisa ezihlobisayo, futhi ithoni yabo yombala ingcono kunemicu emnyama eqhubayo, futhi ibanga lesicelo libanzi.
Uma unentshisekelo kulwazi oluthe xaxa mayelana ne-nano ATO, i-ZnO, i-TiO2, i-SnO2, i-AZO ne-carbon nanotubes ku-anti-static application, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.